ALTERNATORS-TAKUMI AUTO CHIKAMU
Iyo alternator inoonekwa seicho chikamu chemotokari system?
Iyo alternator chikamu chemagetsi system. Iyo ndiyo inobhadharisa bhatiri uye inoichengeta ichichaja.
Iwe unoziva sei kuti iyo inoshandura mota yakaipa?
Unogona kuibvisa uye uve neyemakanika bvunzo kana yakaipa, yakawanda auto zvikamu zvitoro zvinoyedza mahara kana nemari shoma. Kana iyo alternator yakanyungudika zvakakwana mota ichatanga uye nekukurumidza ichitswanya uye yorega nekukurumidza nekuti bhatiri harigone kumhanyisa mota kwenguva refu isati yanyoroveswa. Kana iwe ukawana kusvetuka kutanga mota inomhanya zvikuru uye kana tambo dzabviswa mota inomira mushure memaminetsi mashoma kana mashoma. Yakanakisa nzira yekuve nechokwadi, tora iyo makanika.
Inogona here imwe mota kuchinjisa?
Kwete chaizvo. Asi iyo voltage regulator inogona kurega yakawandisa magetsi kusvika bhatiri. Tarisa semuenzaniso: 1. Uchishandisa voltmeter, tarisa bhatiri voltage pazororo. Inofanira kuverenga + - 12.6 V.
Marii iyo imwe alternator inorema?
Anenge gumi mapaundi kana mashanu makirogiramu
Iwe unogadzirisa sei chinotsiva?
Zvinoenderana nezvisina kunaka bhenji rekutanga riedze uye uone maitiro azvinoita kukubatsira iwe kuwana zano reizvo zvisiri kuita, hapana zvinoburitswa / pamusoro pechaji / zvisirizvo zvinobuda / mabheyari akashata nezvimwe wozokatanura uye edza yega yega chikamu kuti uwane dambudziko, gadza zvikamu zvitsva, bhenji bvunzo kuve nechokwadi kuti inoshanda uye dzorerazve pamotokari mushure mekuchaja uye kuyedza bhatiri